I-Semale Gids: I-Ue U Uw Ngokuvumelana Ne-Uitziet E-Commerce Bedrijf
Njengomthengisi we-eCommerce, kufanele ugcine amathebhu emncintiswaneni. Kungani? Okokuqala, kukusiza ukuba uqondisise amadenki emakethe. Okwesibili, ungcono ukwazi ngezinto uma kuziwa ekudaleni ukumakethaimikhankaso futhi Yebo, ikusiza ukuba uhlukanise ibhizinisi lakho namabhizinisi omncintiswano.
Ngalokhu engqondweni, uJason Adler, uchwepheshe we i-Semalt Amasevisi weDivaysi, inikeza amathiphu ekulandelela indlela yakho yokuncintisana.
Hlela ithimba ukuqapha ama-SEO amaqhinga owawasebenzisayo. Thola inani lezixhumanisi zangemuva zine-plus zifunda ukuthi yiziphi amawebhusayithi axhumanisa kuzo - calcio balilla professionale ficbok. Uma usuthole le datha, vakashela amawebhusayithi wakhoIzimpikiswano zixhumanisa futhi zibone uma ungakwazi ukusakaza ukuthi ithrafikhi evela kubo esitolo sakho.
Thatha lesi sibonelo. Noma nini lapho ngifuna izixhumanisi zamaklayenti ethu, mina thola ukuncintisana kwamakhasimende usebenzisa i-Semalt Analyzer. Isebenzisa 'i-Open Site Explorer' ukuqoqa wonke amawebhusayithi axhumano nabo (ukuncintisana). Ngemuva kokuqoqa lolu datha olubalulekile, ngiphenya ukucela izixhumanisi emuva kanye nakho konke okudingekayo ukuze kusetshenziswe uhlelo.
Imidiya yabokuncintisana nabo bezokubuka
Kufanele futhi ubukele abancintisana nabo kuma-social media ukuze babone okuqukethwe kwabo isu lokuphatha. Kukhona isicelo esimangalisayo okuthiwa i-FollowerWonk evumela ukuthi uhlole ukuthi ubani owalandela ku-Twitter futhi ukuthi ikhasi lakho siqu lithinta kanjani. Yikholelwa noma cha, UmlandeliWonk angakutshela ukuthi ubani okulandelayo, umlingani wakho futhi ngisho nalabo abakulandela kokubili. Uma ubona umuntu othile elandela wena nomncintiswano wakho, khona-ke kukhona ithubayena unesithakazelo emakethe yakho futhi yilowo ofanele ukuxhuma naye.
Olunye uhlelo lokusebenza lewebhu, i-Buzzmo ikuvumela ukuba ubone okuqukethwe okubiwe kakhulu (izithombe,amavidiyo noma amabhulogi) kumakhasi omphakathi omphakathi omncintiswano. Sebenzisa le datha ukuze ucabange ngemibono emisha yamakhasi akho wezokuxhumana.
Cabangela isipiliyoni somsebenzisi
Yenza sengathi ungumsebenzisi ohamba ngewebhusayithi yakho yomncintiswano ngokuyiqiniso ukuyivakashela. Thola into enkampanini, yengeze enqoleni yakho bese uqhubeka ukuhlola. Kwakungelula kanjani lokho? Ingabe kuthathe isikhathi eside? Zamaokufanayo ngokuhambisa izikhalazo / imibuzo bese uhlola uma iwebhusayithi yakho idlula lezi zinsizakalo noma cha. Ungahlola nokuthi yini amaklayenti kufanele athi ngamabhizinisi akho. I-platform ye-Trustpilot kufanele ikusize wenze lokhu ngokukhululekile.
Ingqondo yokuthengisa nokuthengisa
Qaphela imizamo yokuthengisa nokuthengisa yabalingani bakho ukuhlukanisa kwakhoimikhuba yakhe. Indlela yokuqala ingabhalisela amaphephandaba abo ukuze uthole izinhlinzeko zakamuva kanye nezinzuzo. Enye indlela kungenzeka ukudala uhlu oluyimfihlo lwe-Twitter lwamncintiswaneni noma izaziso ze-Google ukuthi zibe ku-loop yazo zonke izibuyekezo. Lokhu kusebenza ngesikhathi sangempela.
Nakuba ukuqhathanisa okuningi kungenziwa online, kunezinye izimo laphokungenziwa ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi. Isibonelo, uma umenyelwe embukisweni wezohwebo noma enkomfeni, cela noma yikuphi umuntu ohleliwe oya kwenzeka kumcimbi waboukubukwa kumasevisi wakho. Batsho ukuthini ngomncintiswano wakho? Sebenzisa lolu lwazi kanye nokubona kwakho ukuze uthuthukise.